राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि नयाँ नोट सटही नगर्ने - सिम्रिक खबर
राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि नयाँ नोट सटही नगर्ने
New notes, File Photo. Source-TKP
काठमाडौं । हरेक वर्ष दसैं–तिहार लक्षित गरेर अर्बौ रुपैयाँका नयाँ नोट सटही गरिँदै आए पनि यस पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट निष्कासन नगर्ने भएको छ । विगतका वर्षमा केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार वा थापाथली कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयबाट नयाँ नोट वितरण हुँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि नयाँ नोट वितरण गर्दा झनै जोखिम बढ्ने भन्दै यस पटक निष्कासन नगर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्दा भीड बढ्ने भएकाले नयाँ नोट वितरण नहुने एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। बैंकका कतिपय कर्मचारी संक्रमित भइसकेका छन्। जसले गर्दा बैंकहरुमार्फत पनि यो वर्ष नयाँ नोट वितरण हुने संभावना नरहेकाे ती अधिकारीले बताए। राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष रु. ५, १०, २०, ५० र १०० दरका नयाँ तथा सफा नोट सटही गर्दै आएको थियो । नोट सटही गर्दा राष्ट्र बैंकमा तथा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो । कोभिडले गर्दा अब आम नेपालीले नयाँ नोट सटही गरेर दसैंमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हटाउन प्रेरित गरिने बैंबको भनाइ छ ।
नयाँ नाटे सटही गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति र नयाँ सुकिला नोट नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै जाने हो भने केन्द्रीय बैंक दोहोरो मारमा पर्छ । यसले एकातिर ढुकुटीमा भएका नाटे झुत्रो हुँदै जान्छ भने अर्को तिर बजारमा नयाँ नोट परिचालन गर्दै जाँदा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने विभाग बताउँछ । नयाँ नोट वितरण गर्ने प्रक्रिया नै कमजोर भएकाले अब नयाँ नोट सटही गर्ने प्रवृत्तिलाई परिमार्जन गर्न जरुरी भएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । यस खालको प्रवृतिलाई हटाउने विषयमा पनि यस अघि पटक पटक छलफल हुँदै आएको छ ।